Ruwaanda oo qaadanaysa tahriibeyaasha ku xaniban Liibiya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ruwaanda oo qaadanaysa tahriibeyaasha ku xaniban Liibiya
Kadib heshiis dhexmaray dawlada Ruwaanda ee aadka u yar iyo qaramada midoobey iyo midowga Yurub ayaa la go’aamiyay in tahriibeyaasha lagu kufsanayo laguna jirdilayo Liibiya ay qaataan oo la geeyo dalkooda.
Ujeedada ayaa ah in inta Liibiya sidan tahay laga kaxeeyo oo la geeyo Ruwaanda inta la helayo dal sadexaad oo qaada inkastoo aanu jirin xilligan qaasatan wadamada ay u socdaan ee Yurub ama dib loogu celiyo dalalkooda.
Naftood heligeyaasha la qaadayo haday ogolaadaan waxa u badan kuwa ka soo jeeda dalalka geeska Afrika oo dhibka ugu badan ka haysto Liibiya. Ruwaanda ayaa balan qaaday inay siiso deganaansho noqdaana qaxooti la aqoonsan yahay.
Ruwaanda oo ka soo kabatey dagaal sokeeye oo aad u xumaa ayaa ka mida dalalka hadda martigeliya qaxooti aad u farabadan oo ka yimi dalka Koongo ee ay jaarka yihiin. Waana wadamada ka badbaaday cudurka Iboola inkastoo dadka ka yimaada Koongo keenaan cudurka.
Ilaa hadda ma jirto Somali u diyaara inay tagaan dal Afrikaana kana shaqaystaan haddayba jirto. Waxayse sheegeen qaramada midoobey in aan la qasbeyn.
Dawladaha iyagu diidey inay sii hayaan qoxootiga waxa ka mida Tuuniisiya inkastoo dawlada Somaliya xaqiijisay inay jiraan dhalinyaro Somali ah oo loo qaaday dalka fiqiirka ee Nayjar ee ku yaala saxaraha galbeedka Afrika halkaasna ku hungoobeen in laga qaado.
Tan ugu daran ayaa ah in haween Somaliyeed ogolaadaan in la geeyo dal Afrikaana maadaama kuwa ugu horeeya ee laga qaadayo Liibiya iyaga yihiin.